PRO. FIT GYM, ရန်ကုန် — အဖွင့်နာရီ, လိပ်စာ, ဖုန်းကို
PRO. FIT GYM, ရန်ကုန်	လိပ်စာ, ဖုန်းကို, အဖွင့်နာရီ, လမ်းညွန် နှင့် တည်နေရာ
09 863 1863
ဇေယျသုခလမ်း, ရန်ကုန်, မြန်မာ
PRO. FIT GYM, အဖွင့်နာရီ
တနင်္လာနေ့ ယနေ့တွင် ပယ်နေ့က
အင်္ဂါနေ့ 06:00 — 21:00
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 06:00 — 21:00
ကြာသပတေးနေ့ 06:00 — 21:00
သောကြာနေ့ 06:00 — 21:00
စနေနေ့ 06:00 — 21:00
တနင်္ဂနွေ 06:00 — 21:00
Pro-Fit Gym	17 မီတာ။ Mr. Aung Khaing Win Body Fitness Center	582 မီတာ။ Thuwanna Bhumi Event Park	602 မီတာ။ Yangon Indoor stadium	821 မီတာ။ トゥンワナスタジアム	1.07 ကီလိုမီတာ Real Power Body Fitness Center	1.11 ကီလိုမီတာ The One Fitness Studio	1.46 ကီလိုမီတာ Senso	1.54 ကီလိုမီတာ ရန်ကုန်စကွပ်ကလပ်	1.71 ကီလိုမီတာ U-Fit Gym	1.93 ကီလိုမီတာ
ပဲခူးမြို့	64.19 ကီလိုမီတာ ဟင်္သာတ	120.8 ကီလိုမီတာ သထုံ	126.83 ကီလိုမီတာ ပုသိမ်	153.77 ကီလိုမီတာ မော်လမြိုင်	160.96 ကီလိုမီတာ တောင်ငူ	238.03 ကီလိုမီတာ ပြည်	245.57 ကီလိုမီတာ ထားဝယ်	373.2 ကီလိုမီတာ ရေနံချောင်း	427.66 ကီလိုမီတာ Meiktila	453.15 ကီလိုမီတာ
PRO. FIT GYM မှာတည်ရှိပါတယ် — ဇေယျသုခလမ်း, ရန်ကုန်, မြန်မာ.
ကျနော်တို့ဖုန်းဖြင့်ပိတ်ပွဲနှင့်ပြတ်တောက်, ကြိမ်ဖွင့်လှစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ်အကြံပြုပါသည် — 09 863 1863.